အစာအိမ်ဓာတ်ငွေ့မှသက်သာရာရစေရန်4စက်ရုံ - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » သဘာဝကကုစား အစာအိမ်ဓာတ်ငွေ့သက်သာရာဖို့ "4 စက်ရုံ
လူအတော်များများဟာမကြာခဏအစာခြေမမှန်ကနေဆငျးရဲဒုက်ခနှင့်အစာအိမ်ဓာတ်ငွေ့နှင့်အခြားနာကျင်ကိုက်သက်သာရာမှကုစားရှာကြာလော့။ အချို့သိရန်အလွန်အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ဘာကြောင့်ဤသူကားအ သဘာဝကျကျသူတို့ကိုတားဆီးခြင်းနှင့်စစ်တိုက်ခြင်းကိုဆေးဖက်ဝင်အပင်။
ဒီအပိုဒ်4အတွက်အစာအိမ်ဓာတ်ငွေ့မှသက်သာရာရစေရန်အထိရောက်ဆုံးသောဟင်းသီးဟင်းရွက်ထွက်ရှာပါ။ ကျနော်တို့သိပ္ပံနည်းကျစစ်ဆေးအတည်ပြုအကျိုးကျေးဇူးများဆွေးနွေးကြမည် စမုန်နက်, chamomile, Ceylon သစ်ကြံပိုးနှင့်ဂျင်း။ ဤဆောင်းပါး၏ကြွင်းသောအရာအတွက်သူတို့ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိ!
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းထဲမှာစုဆောင်းအဆိုပါပိုလျှံဓါတ်ငွေ့ လေ, လေချဉ်တက်ခြင်းနှင့်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည် ဝမ်းဗိုက် distention. အဆိုပါအကြောင်းတရားများငယ်လေးအူထဲမှာဘက်တီးရီးယား overgrowth မှအချို့သောအစားအစာများကိုများစွာနှင့်မတူညီကြ, သည်းမခံစေနိုင်ပါတယ်။
ဆရာဝန်မှခရီးစဉ်အပြင်ယင်းဓာတ်ငွေ့မကြာခဏဖြစ်ကြပါလျှင်ငါတို့သည်လည်းအချို့သောသဘာဝကကုစားကိုသုံးနိုင်သည်။ ဤရိုးရှင်းသောလှည့်ကွက်ဆေးဖက်ဝင်အပင်၏ပြုတ်ရည်နှင့်အတူအစာအိမ်ဓာတ်ငွေ့သက်သာရာနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကိုကြိုးစားပါနှင့်သင့်အစာခြေအပေါ်၎င်းတို့၏သက်ရောက်မှုစစ်ဆေးပါ။ ဤဆောင်းပါးတွင်အတွက်နောက်ပိုင်းမှာကျနော်တို့အသေးစိတ်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: အနှေးအစာခြေ: ရှားစောင်းလက်ပတ်နှင့်အတူ4ကုစား
1 ။ စမုန်နက်
ပထမဦးစွာအစာအိမ်ဓာတ်ငွေ့သက်သာရာဖို့အကောင်းဆုံးလူသိများကုစားများထဲမှစမုန်နက်ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏မျိုးစေ့များ, မြစ်များနှင့်အရွက်နိုင်ငံအများအပြားအတွက်ဆေးတစ်လက်ဖြစ်ကြောင်း အစာခြေတိုးတက်ကောင်းမွန်ခြင်းနှင့်အစာစားပြီးနောက်ဝမ်းဗိုက် distention တိုက်ခြင်း။
စမုန်နက်ရှိပါတယ် carmine။ ဤသည်ကိုဆိုလို လေ၏အမှု၌အအူဓါတ်ငွေ့၏ထုတ်ပယ်ခြင်းနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်။ ထို့အပြင်ကြောင့်ဝမ်းဗိုက်နာကျင်မှုမှသက်သာရာရစေရန်ကူညီပေးသည်။ ဒါဟာကယ်ဆယ်ရေးခွင့်ပြုခြင်းနှင့်ဝမ်းလျှောကိုရပ်တန့်နိုင်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့စမုန်နက်များအတွက်စံပြဆေးတစ်လက်ဖြစ်ပါတယ် ကလေးငယ်အတွက် colic များ၏ပြင်းထန်မှုလျှော့ချပေးပါတယ်။ လေ့လာမှုတစ်ခု 12 ရက်သတ္တပတ်ထက်လျော့နည်းကလေးငယ်အတွက်၎င်း၏အမျိုးအနွယ်ကိုရေနံ emulsion ၏တဦးတည်းကိုအသုံးပြုပြီးအကြံပြုထားသည်။ ဒီကုသမှုအူလမ်းကြောင်းဖြစ်ပေါ်စေသည်ကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်အူသိမ်၏လုပ်ဆောင်မှုကိုတိုးမြှင့်ကူညီနိုင်ဘူး။
ဒါ့အပြင်ဖတ်ပါ: အူလမ်းကြောင်းဘက်တီးရီးယား overgrowth ၏ 10 ဆိုင်းဘုတ်များ
2 ။ အစာအိမ်ဓာတ်ငွေ့မှသက်သာရာရစေရန် Chamomile
La camomile ကြောင်းအမြဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အစားအစာများ၏ခနျးထဲမှာလက်ရှိဖြစ်ပါတယ်ပြိုးနပွေီဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ဆေးဖက်ဝင်စက်ရုံတစ်ဦးအစာခြေလျှော့ပေါ့ဖြစ်ပါတယ် အာရုံကြောအစာအိမ်ထိခိုက်လာသောအခါသူကမကြာခဏကြာပါသည်။ ဓာတ်ငွေ့အမှု၌ကူညီပေးဖို့အပြင်, ကဝမ်းလျှော, ရင်, ပျို့ခြင်းနှင့်အန်ဆန့်ကျင်အဖြစ်ကလေးတွေအတွက် colic ဆန့်ကျင်ကိုလည်းထိရောက်သောဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပန်းပွင့်အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းရောဂါကုသရန်ရှေးခေတ်ကကတည်းကအသုံးပြုသည် ယင်း၏အစာခြေမှတဆင့်, carmine antispasmodic နှင့်သက်သာစေသောဆေး။ ကျနော်တို့အနေနဲ့ပြုတ်ရည်ကိုယူသို့မဟုတ်ယင်း၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံကိုသုံးနိုင်သည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, တကဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီ (စသည်တို့ကိုဗာဒံသီး, အုန်းသီး, သံလွင်,) တွင်ရောလျက်နှင့်ဝမ်းဗိုက်၏အနှိပ်လုပ်ဆောင်ရပါမည်။
3 ။ Ceylon သစ်ကြံပိုး
သစ်ကြံပိုးအပေါငျးတို့သမျိုးပေါင်းကျနော်တို့ (Ceylon သစ်ကြံပိုးအတွက်ကဒီမှာစိတ်ဝင်စားCinnamomum zeylanicum) ။ ဒီအမြင်တစ်ခုဆေးဘက် point ရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအပင် Anti-inflammatory, ဓါတ်တိုး, မွှား, antidiabetic သို့မဟုတ် anticancer ဖြစ်ပါတယ်။
La သစ်ကြမ်းပိုးဤအသီလကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အစွမ်းထက်အစာခြေဆေးတစ်လက်။ ဒါဟာသဘာဝဓာတ်ငွေ့, လေနှင့်ရင်တားဆီးခြင်းနှင့်သက်သာရာမှထိရောက်သောဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ကအသည်း၏သင့်လျော်သောလုပ်ငန်းဆောင်တာကိုအားပေးအားမြှောက်နှင့်အူထဲမှာကပ်ပါးကောင်များ၏ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်ကိုတားဆီးနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်အစာစားမှဘယ်လိုနေသလဲ? သစ်ကြံပိုးကိုအသုံးပြုထားကြောင်း၏ကြီးစွာသောအားသာချက်ရှိပါတယ် savory နှင့်ချိုမြိန်နှစ်ဦးစလုံးအများအပြားဟင်းလျာများအတွက်။ ကျနော်တို့သူတို့ကိုသင်ပိုပြီးအရသာပေးရစွပ်ပြုတ်ဖို့က add အကြံပြုပါသည်။ အားလုံးသင့်ရဲ့အချိုပွဲအတွက်သစ်ကြံပိုးတစ်ခုထိဖော်ပြထားခြင်းဖို့မဟုတ်ပါဘူး။
4 ။ ဂျင်း
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျနော်တို့အနေနဲ့အရှေ့တိုင်းဇာစ်မြစ်အမွှေးအကြိုင်နှင့် ပတ်သက်. ဆွေးနွေးရန်ရှိသော်လည်းကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ယခုအခါရေပန်းစားသည်။ အဆိုပါ ဂျင်း, ၎င်း၏ပြင်းထန်သောအရသာများအတွက်မသိ, tangy နှင့်လန်းဆန်း, gastronomy တစ်ဦးဂန္ဒါပေမယ့်လည်းရောဂါအများအပြားအမျိုးအစားများများအတွက်ကိုးကွယ်ရာဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါအစာခြေစနစ်, ဂျင်း၏ကျဉ်းမြောင်းသွယ်လျအစာအိမ်ဓာတ်ငွေ့သက်သာရာကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာအစအဘို့အထိရောက်သောဖြစ်ပါသည် ဝမ်းလျှောဆက်ဆံပါနဲ့အစာအိမ်အနာတားဆီး။ ကျနော်တို့လတ်ဆတ်သောသို့မဟုတ်ခြောက်သွေ့ပြုတ်ရည်သို့မဟုတ်ဖျော်ရည်ယူတစ်ခုသို့မဟုတ်အဖြည့်အဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အခုဆိုရင်သင်လေတားဆီးခြင်းနှင့်သက်သာရာကူညီပေးပါမည်ဤ4ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ၏ဂုဏ်သတ္တိများကိုငါသိ၏။ သငျသညျအစဉ်အမြဲအစာခြေကူညီခြင်းနှင့်အသက်တာ၏သင့်ရဲ့အရည်အသွေးကိုတိုးတက်စေရန်လက်ပေါ်သူတို့ကိုရှိသည်သေချာအောင်လုပ်ပါ။
chamomile သလောက်ပူစီနံသူတို့တစ်တွေအစာခြေလုပ်သူများအဖြစ်ပြုမူသောကွောငျ့, ရင်သက်သာရာကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ Read more »
the post အစာအိမ်ဓာတ်ငွေ့မှသက်သာရာရစေရန်4စက်ရုံ ပထမဦးဆုံးအပျေါမှာထငျရှား သင့်ရဲ့ကနျြးမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ.
6 အကြံပေးချက်များသဘာဝကျကျအိမ်မှာအအေးမိရိုက်ပုတ် - သင့်ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ
hypothyroidism ၏3ဖြည့်စွက်ကုစားကုသမှု - သင့်ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ